ISyrio Forel Inqunyelwe Ukubuyela 'Komdlalo Wezihlalo Zobukhosi' - Izindaba
Umlingiswa we-One 'Game of Thrones' Onconyelwe ukubuya
One Game Thrones Character Who S Primed
ukuzivocavoca ukunciphisa amafutha esisu ekhaya
Siyakuzonda ukona ohlangothini olungenalutho lwengilazi, kepha kusele iziqephu ezintathu kuphela Umdlalo wema-Throne . Futhi njengoba sesiqedile maphakathi nesizini yokugcina yomdlalo we-HBO, asikwazi ukuzibamba kodwa sethemba I-GoT amandla akhona, uDavid Benioff noD.B. Weiss, uzosicosela izinto ezimbalwa ngaphambi kokuthi sivalelise. UChristopher Williams, isiNgisi, Umlando kanye no Umdlalo wema-Throne umfundisi (yep, leyo nto) ye Abafundisi beVarsity , uzizwa ngendlela efanayo.
UWilliams uxoxe noPureWow ngazo zonke izinto Umdlalo wema-Throne wathi ulindele ukuthi bazovala izimbobo ezithile zesiza kusuka kwisizini yokuqala okudingeka zichazwe. Yimuphi umgodi wesakhiwo ngokukhethekile? O, kuzungeza indoda egama linguSyrio Forel. Uyamkhumbula?
Njengokuvuselela kabusha okusheshayo, uNed Stark (Sean Bean) waqasha uSyrio (Miltos Yerolemou) ukuba afundise u-Arya Stark (Maisie Williams) ukuthi uyisebenzisa kanjani inkemba kahle ngenkathi yokuqala. (My how izinto zishintshile.) USyrio waqeqesha u-Arya kwezobuciko beBraavosi weWater Dance, yize ngokwazi kukaSansa (uSophie Turner), wayenguthisha womdanso ka-Arya. Ngenkathi uNed Stark eboshelwa ukuvukela umbuso kwathi onogada bakaLannister beza bezothatha u-Arya, uSyrio walwa nabo wamtshela ukuthi abaleke ngenkathi edlala neMeryn Trants.
Asikaze sikubone okwenzekile kuye, kepha ngesizini yesine, u-Arya utshele uHound (uRory McCann) ukuthi ukholelwa ukuthi uSyrio ufile. Ngesizini yesihlanu, waphindisela ukufa kwakhe futhi wabulala uMeryn Trant endaweni yezifebe. Into ukuthi, asikaze sithole isiqinisekiso sokuthi uSyrio ufile.
Ngenkathi uMelisandre (uCarice van Houten) ebuza u-Arya ukuthi sithini ngokufa (Impendulo: Hhayi namhlanje) ngesizini yesishiyagalombili, isiqephu sesithathu , kwaba sengathi kufanekisela ukubuya kukaSyrio. Wenze, ngemuva kwakho konke, ukusho leyo nto ngqo ku-Arya emuva osukwini. Lokho kwakuyinkomba eyanikeza uWilliams, futhi.
Ngakho-ke umfundisi [uSyrio Forel] akakaze abonwe ngempela ochungechungeni noma ezincwadini njengofayo. Uvele wabaleka, sazitshela ukuthi ushonile. Ngicabanga ukuthi angahle abuye futhi ngicabanga nokuthi angahle abe yiNdoda engenabo ubuso, kuchaza uWilliams.
Akayedwa ekucabangeni lokhu. I-intanethi ibigcwele imibono mayelana noSyrio ngokuba yiNdoda engenabo ubuso, uJaquen H’ghar (Tom Wlaschiha), isikhashana. Bobabili abakhanda izinkemba abaqeqeshiwe eBraavos abathi Kuningi nje. UJaquen uze wabona ukuthi u-Arry empeleni ubeyikho U-Arya Stark . Njengoba uJaquen engathatha ubunikazi banoma ngubani, kungenzeka kakhulu ukuthi empeleni uyiSyrio.
Njengoba uchungechunge lufinyelela esiphethweni, bekungafaneleka kuphela ukuthi amadoda (indoda?) Ofundise u-Arya okuningi kwalokho akwaziyo abeze ukuzomhalalisela ngokunqoba iNkosi Yasebusuku (uVladimir Furdik) futhi, ngethemba, Cersei (ULena Headey).
OKUhlobene : Isaac Hempstead Wright Leaks Photo of 'Game of Thrones' Isiqephu 3 ‘Ukuphela Okuhlukile’
new www ucansi com
ama-movie esiNgisi yentsha
kwekhanda elisontekile igxathu negxathu
ukuzivocavoca ukunciphisa isisu ngesonto